पत्रपत्रिकामा देश : प्रधानमन्त्रीको डायलासिस !
संघीय राजधानी काठमाडौं बाट छापिएका पत्रिकाहरुले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारको विषयमा समाचारलाई प्रमुखताको साथ छापेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्रीलाई डाइलासिस शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । नगरिक दैनिकले अस्पतालमा प्रधानमन्त्री शिर्षकमा समाचार छापेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य शिर्षकमा मुख्य समाचार छापको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धापासीमा रहेको ग्राण्डी अस्पतालमा डाइलासिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बुधबार बिहान नियमित परीक्षणको लागि अस्पताल भर्ना भएको बताएपनि आईसीयूमा राखेर गोप्य रुपमा डाइलासिस गरिएको श्रोतलाई उदृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्रीकी नीजि चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह र अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर क्रराज पाण्डेले नियमित उपचार प्रकृयाका लागि अस्पताल भर्ना भएको आज (बिहीबार) बिहानसम्ममा डिस्चार्ज हुने एक विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । ग्राण्डीका केही चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको अस्पताल भर्ना गरिएको विषयलाई नियमित फलोअप भन्न नसकिने बताएका छन् ।
उपनिर्वाचनको तयारीमा दल कस्ले मार्ला बाजी ? शिर्षकमा नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार छापेको छ । कास्कीमा क्रियाशिल राजनीतिक दल क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले कार्यतालिका टाँस्नुका साथै मतदाताको नामवलीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । १४ मंसीरमा हुने उपनिर्वाचनको लागि जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश काजीबहादुर राईलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । दलहरुले उमेद्वार छनोट र निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरु गर्न थालेका छन् ।
दाङमा प्रदेश सभा सदस्यकोलागि हुने उपनिर्वाचनको लागि दलहरु तयारी सुरु गरेका छन् । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख)मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा र नेपाली कांग्रसबीच प्रतिश्पर्धा हुने देखिएको नागरिक दैनिमा समाचार छ ।
निर्मलको किर्तिमान शिर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार छ । ब्रिटिस आर्मीको जागिर छोडेर आएका म्याग्दीका निर्मल पुर्जाले ६ महिना ६ दिनमा विश्वका ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला सबै १४ वटा हिमाल आरोहण गरेका छन् । मिसन कै रुपमा हिमाल आरोहण गरेका पुर्जा मिसन पुरा भएकोमा खुसी भएको बताए । चीनले सिसापाङमा हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर नेपाल सरकारको विशेष पहलमा ८ हजार २७ मिटर अग्लो यो हिमाल समेत उनले आरोहण गर्न पाए ।